China Eco-friendly Wood Mejupụtara Co-extrusion WPC Decking emepụta na suppliers | Lihua
Eco-enyi na enyi Wood mejupụtara Co-extrusion WPC Decking
Onye nwe ya:WPC Decking
Ahịa:$ 4.88 / M
Agba:Kọfị, chọkọleti, osisi, osisi uhie, osisi sida, ojii, isi awọ, wdg
2.2m, 2.9m ma ọ bụ ahaziri
Park, Landscape, N'èzí n'elu ikpo okwu
● Co-extrusion ma ọ bụ osisi a na-ekpuchi ekpuchi bụ bọọdụ WPC nke abụọ. A haziri ha na mkpuchi nke na-ejikọta na isi nke mbadamba n'oge n'ichepụta. Process Usoro co-extrusion gụnyere iji antioxidants, agba, na ndị na-emechi UV maka ịkọwa isi.
Board Lihua's co-extruded board na-enweta ngbanwe dị iche iche na-agbanwe agbanwe na nke zuru oke, na-atụnyere naanị osisi okike, teknụzụ a dị elu na nke ọhụụ na-enye ohere maka ijikọ agba dị egwu, na-enye otu n'ime bọọdụ jikọtara ọnụ.
Anọ nzukọ co-extrusion edoghi maka rụpụta, anyị nwere ike ijide n'aka gị anapụta time.Also nwere ike inye ndị ọzọ nhọrọ maka you.We ga-etinye na-okokụre ngwaahịa na Specific ọnọdụ, mgbe mgbe ọgwụgwọ okokụre, anyị ga-abịa ndị a mbadamba dị ka mkpebi gị.
Ileghara Nguzogide Nkụ EN 15534-1: 2014 Nkebi nke 6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 Pendulum uru≥36 Ntụziaka Longtitudinal: Pụtara 56, Min 55
EN 15534-4: 2014 Nkebi nke 4.4 Kwụ kwụ: Pụtara 73, Min 70
Ileghara Nguzogide Wet EN 15534-1: 2014 Nkebi nke 6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 Pendulum uru≥36 Ntụziaka Longtitudinal: Pụtara 38, Min 36
EN 15534-4: 2014 Nkebi nke 4.4 Kwụ kwụ: pụtara 45, Min 43
Njirimara mgbanwe EN15534-1: 2014 AnnexA -F'max: Mean≥3300N, Min≥3000N Ike Bending: 27.4 MPa
EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.2 -Deflection n'okpuru ibu nke 500N Mean≤2.0mm, Max≤2.5mm Modulus nke Elasiticity: 3969 MPa
Oke ibu: Pụtara 3786N, Min 3540N
Ntughari na 500N:
Pụtara: 0.86mm, Max: 0.99mm
Mgbu mmiri na mmiri mmiri EN 15534-1: 2014 Nkebi 8.3.1 Mgbapụta pụtara: ≤4% na ọkpụrụkpụ, -0.8% n'obosara, -0.4% n'ogologo Mgbapụta Nke pụtara: 1.81% na ọkpụrụkpụ, 0.22% n'obosara, 0.36% n'ogologo
EN 15534-4: 2014 Nkebi 4.5.5 Max ọzịza: ≤5% na ọkpụrụkpụ, -1.2% n'obosara, -0.6% n'ogologo Max aza: 2.36% na ọkpụrụkpụ, 0.23% n'obosara, 0.44% n'ogologo
Mmiri mmiri: pụtara: 4.32%, Max: 5.06%
Pụtara: ≤7%, Max: ≤9%
Iguzogide indentation EN 15534-1: 2014 Nkebi 7.5 Brinell ekweghị ekwe: 79 MPa
EN 15534-4: 2014 Nkebi nke 4.5.7 Ọnụego nke na-agbanwe mgbake: 65%
Nke gara aga: Nguzogide Okpu Okpu Osisi N'ogige WPC oghere Decking
Osote: N'èzí Co-extruded Wood mejupụtara WPC Cladding
Boards nwụnye Guide download
Q1: Olee nnukwu ụlọ ọrụ gị? Kedu uru uru kwa afọ bara?
A: Lihua bụ High na New Tech Enterprise, ekpuchi na 15000 sq mita osisi na Langxi Indusrial Zone. Anyị nwere ihe karịrị ndị ọrụ 80, ndị niile nwere ọmarịcha ọrụ WPC.
Q2: Kedu ihe nyocha ị nwere?
A: Anyị factory nwere Mechanical onwunwe tester, Fire-ratting tester, Anti-ileghara tester, Arọ, wdg.
Q3: Gịnị bụ gị mma usoro?
A: N'oge rụpụta, QC anyị ga-elele nha, agba, elu, ogo, mgbe ahụ ha ga-enweta otu mpempe iji mee nyocha ihe onwunwe. .Mgbe na-eme mgbe ọgwụgwọ, ha ga-elele àgwà.
Q4: Gini bu ngwa ahia gi? Olee otú e si nweta ya?
Q5: Ogologo oge ole bụ ọrụ WPC ngwaahịa?
Q6: Kedu oge ịkwụ ụgwọ ị ga-anabata?
Q7: Tụnyere ihe na osisi, ihe bụ uru nke WPC ngwaahịa?
Q8: Ndi WPC ngwaahịa mkpa sere? Kedu agba ị nwere ike ịnye?
WPC decking mputa
WPC decking ego
WPC n'èzí decking
Waterproof Wood mejupụtara Abụọ Agba Co-extrusio ...
WPC n'èzí decking, WPC mejupụtara decking, osisi plastic mejupụtara decking, N'èzí WPC decking, WPC decking n'ala, WPC ụlọ,